Turkey oo Sacuudiga ku eedeeyey inay dunida ka qarisay dadkii cumrada ee Coronavirus laga helay | Xaysimo
Home War Turkey oo Sacuudiga ku eedeeyey inay dunida ka qarisay dadkii cumrada ee...
Turkey oo Sacuudiga ku eedeeyey inay dunida ka qarisay dadkii cumrada ee Coronavirus laga helay
Turkey ayaa ku eedeysay Sacuudi Carabiya inay dunida ka qarisay tirada dadkii tegay cumrada ee laga helay cudurka Coronavirus, taasi oo halis gelisay dadaallada lagu xakameynayo faafitaanka cudurkaas.
Wasiirka arrimaha gudaha Turkey Suleyman Soylu ayaa sheegay in kiisaskii ugu horreeyey ee Coronavirus ee Turkey la helay kaliya kadib markii baaritaan lagu sameeyey dadkii dalkaas u dhashay ee kasoo laabtay Sacuudiga.
Waxa uu sheegay in ka hor dadkaas, aan Turkiga lagu arkay wax kiisas ah oo la xiriira Coronavirus.
“Sacuudi Carabiya naguma wergelin annaga iyo dunida kaleba kiisaska Coronavirus,” ayuu yiri Suleyman Soylu oo la hadlay wakaaladda wararka Turkey ee Anadolu.
“Markii dadka ay kasoo laabteen cumrada, wasaaradda caafimaadka waxay qaaday tallaabooyin kadib markii qaarkood laga helay Coronavirus, waxaana la geeyey xarumo lagu hayo,” ayuu yiri.
Turkey ayaa waxay xaqiijisay in 75 qof ay cudurkaas ugu dhinteen dalka, halka guud ahaan uu sameeyey 3,629 qof. Si kastaba Turkey ma aysan diiwaan-gelin wax kiisas ah ka hor inta aan laga helin dadkii kasoo laabtay cumrada.
Turkey ayaa waxay xanuunkan ka baartay 40,000 qof, kadib markii Shiinaha ay ka heshay 50,000 oo ah qalab 15 daqiiqo gudahood ku sheega natiijada baaritaanka. Waxay sidoo kale fileysaa inay maanta hesho 300,000 oo kale oo ah aaladaha tijaabada oo ka imanaya Shiinaha.
Ilhaan Cumar oo shaacisay tallaabo adag oo laga qaadi doono gabadhii...
Afhayeenka TPLF oo sheegay in Diyaaradaha aan duuliyaha lahayni dad ra’yid...
Wargeysyada Carabta oo Abiy Axmed ku sheegay cadow doonayo inuu haraad...
Sida haweenka ay maskaxdooda u saameyso dhalmada
Muxuu yahay “isku dayga dil” ee Erdogan ka badbaaday?
Xayawaan hor leh oo laga helay fayraska Koroona
Muxuu yahay hubka uu Shiinaha heysto ee uu Mareykanku ka baqayo?
Itoobiya oo sheegtay in magaalooyin horleh ka qabsatay TPLF
Madaxweyne sheegay in dadka laga talaalay Covid-19 ay halis ugu jiraan...
Ilhaan Cumar oo soo bandhigtay cod halis ku ah nolosheeda oo...
MADAXWEYNE MAXAMED CABDULLAAHI FARMAAJO OO DALKA DIB UGU SOO LAABTAY
Maxaad ka taqaanaa magaalooyinka ugu qaalisan iyo kuwa ugu raqiisan ee...
Ilhan Cumar oo sheegtay in ay wajahayso halis weyn oo nafteeda...
Jamhadda TPLF oo laga qabsaday magaalo taariikhi ah
Buur-Madow wixii Somaliland laga aaminsanaa buu ku hadaaqay in la buunbuuniyana...